Mitohy ny Fifampitifirana Ao Amin’ny Sisintany Kyrgyz sy Tajik · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2014 16:05 GMT
Olana ao Azia Afovoany ny Sisintany. Fefy vy sary Wikipedia
Herinandro vaovao ary mbola nanjakan'ny herisetra hatrany tao amin'ny sisintan Kyrgyz sy Tajik. Araka ny mahazatra, samy manana ny fandikany azy ny governemanta, ny fampahalalam-baovao ary ny mpiserasera ao amin'ny firenena roa tonta.
Sisintany Kyrgyz-Tajik. Sary avy amin'ny knews.kg. Nahazoan-dalana.
Araka ny filazan'ny manampahefana Kyrgyz, efa milamina ny toe-draharaha ao amin'ny sisintany Kyrgyz-Tajik, izay nahafatesana olom-pirenena Tajik iray tamin'ny 10 Jolay. Tamin'ny Alakamisy farany teo, nisehoana fifampitifirana noho ny adin-tsisintany teo amin'ireo mpiambina sisintany Tajik sy Kyrgyz tao Batken oblast akaikin'ny toeram-piampitana ao Tamdyk. Taorian'izany fifampitifirana tao amin'ny sisintany izany, olom-pirenen'i Tadjikistana fito no naratra, miampy nynamoy ny ainy. Nanambara ny Solontenan'ny Sampam-panjakana misahana ny Sisintany Kyrgyz fa tao anatin'ny ara-dalàna no nanaovan'ireo mpiambina sisintany Kyrgyz ny asany rehefa nandika lalàla mifehy ny sisintany ireo olom-pirenena Tajik:
Noho ny “fihetsika tsy ara-dalàna nataon'ireo olom-pirenena Tajik” no nahatonga ny fifampitifirana. Olona teo amin'ny 30 teo no niezaka nanamboatra fatsombe (pipeline) avy aty Kyrgyzstan mankao an-tanàna ambanivohitra Bedak ao amin'ny tanin'i Tajik Vorukh hodidinin'ny firenenkafa. Nangataka ny hampitsaharana ny asa [amin'ny fantsombe] ireo mpiambina sisintany Kyrgyz satria mbola ifandirana ny tany. Ho setrin'izany anefa dia nitoraka vato tany amin'ireo mpiambina sisintany Kyrgyz ireo olom-pirenen'i Tadjikistan, ka voatery nitifi-danitra ho fampitandremana ny mpiambina sisintany. Taorian'izany, tonga tao amin'ny toerana nisian'ny gidragidra ireo mpiambina Tajik ary nitifitra ireo mpiambina sisintany Kyrgyz.
Hafa ny fijerin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Tajik ny zava-niseho, ary nandefa ity fanamarihana manaraka ity hoan'ny governemanta Kyrgyz izy:
Nanao fihetsika feno herisetra tamin'ireo olom-pirenena Tajikistan ny mpiambina sisintany Kyrgyz ary nanao fitakiana tsy ara-dalàna amin'ny fampitsaharana asa ao amin'ny faritra. Rehefa tonga ireo mpiambina sisintany Tajik ary nangataka tamin'ireo mpiara-miasa aminy Kyrgyz mba hampitsahatra ny fihetsik'izy ireo tsy ara-dalàna, nitifitra tany amin'ireo olom-pirenena Tajik ny mpiambina sisintany Kyrgyz. Olom-pirenena 7 Tajikistan no naratra vokatry ny fitifirana. Tsara ny manamarika fa tsy nitifitra na dia iray monja aza ireo mpiambina sisintany Tajik nandritra ny disadisa.
Tsy niombo-kevitra tamin'izany ny Sampam-panjakana misahana ny Sisintany Kyrgyz, izay nisisika nilaza fa nitifitra ireo mpiambina sisintany Kyrgyz mitovy aminy tao amin'ny toeram-piampitana sisintany Tamdyk ireo mpiambina sisintany Tajik.
An'iza anefa ny tany?
Ny fototr'olana dia ny tsy nahavitana namaritra sisintany midadasika taorian'ny vanim-potoana Sovietika. Amin'ilay antsoin'ny sasany ho hafetsen'i Staline, nanangana paoson-tsisintany maro ivelan'ny sisintany ankapobeny Kyrgyz, Tajik ary Uzbek ny firaisana Sovietika. Izany toe-javatra izany no nahatonga ireo mponina “tafavoaka ny faritra” te-hifandray amin'ireo tanàna kely any amin'ny “tanindrazany” sy ny mponina any amin'ny tanibe te-hanamboatra foto-drafitrasa (lalana) mampifandray ireo faritra tafavoaka, mba tsy hisahiranan'izy ireo handalo ny fisavana eny amin'ny sisintany.
Tao amin'ny Eurasianet misy ny bilaogy Inside the Cocoon, mpanoratra gazety David Trilling nanazava ny fifandraisana teo amin'ny herisetra tamin'ny 10 Jolay sy ny fifampitifirana hafa tao amin'ny faritra tamin'ny taloha kokoa tamin”ity taona ity.
Tensions have grown in the disputed areas around Vorukh and the Kyrgyz village of Ak-Sai (map here) in recent years as the population has increased and the two governments push the idea of firm national boundaries in a region where none have previously existed. In January, arguments over the construction of a Kyrgyz road led to an hour-long shootout between border guards that left at least seven injured. The Kyrgyz say the Tajiks fired shells and tried to destroy a small dam. I visited the region shortly after the violence.
Mitombo ny fifanenjanana eo amin'ireo faritra ifandirana manodidina an'i Vorukh sy ny tanàna kely Kyrgyz ao Ak-Sai (ato ny sarintany) nandritra izay taona vitsy izay, satria mitombo ny mponina ary mandrisika ny hanangana sisintanim-pirenena mafonja ao amin'ny faritra izay mbola tsy nisy teo aloha ny governemanta roa tonta. Tamin'ny volana Janoary, nitarika fifampitifirana nandritra ny adiny iray teo amin'ireo mpiambina sisintany ny fifandresen-dahatra hanamboarana lalana Kyrgyz ka olona fito farafahakeliny no naratra tamin'izany. Nilaza ny Kyrgyz fa nitifitra baomba sy niezaka nandrava fefiloha madinika ny Tajik. Nitsidika ny faritra aho fotoana fohy taorian'ny herisetra.
Na dia tsy afaka miditra aterineto aza ireo olona monina ao amin'ireo faritra any amin'ny sisintany ireo, niresaka am-pahavitrihana amin'ny fiharatsian'ny toe-draharaha ao amin'ny sisintany iombonana ny tandrenivohitra Tajik sy Kyrgyz. Olom-pirenen'i Kyrgyztan, Kanykei Toichubekova naneho hevitra tao amin'ny pejy Facebookn'ny gazety Kyrgyz Vecherni Bichkek:
Kyrgyz izahay, nahoana izahay no tsy afaka manamboatra lalana ao amin'ny sisintaninay manokana? Manontany aho hoe nahoana ny olom-pirenena ao amin'ny firenena hafa no afa-miteny aminay izay tokony atao. Avelao izy ireo hanapa-kevitra ao amin'ny sisintaniny manokana.
Nangataka tamin'i Kyrgystan mba hamindra ny biraon-tsisintaniny ao amin'ny faritra i Tadjikistan tamin'ny 11 Jolay, izay niteraka fahatezerana bebe kokoa teo amin'ireo Kyrgyz tia tanindrazana tahaka an'i Rafael Aidekov, izay niampanga ireo Tajik mpifanolo-bodirindrina aminy ho maka tsimoramora hatrany ny sisintany Kyrgyz:
Atsy ho atsy, hanahy ny lambany ao amin'ny Lapan'ny Governemanta [antsika] izy ireo.
Naneho hevitra am-pahatezerana tahaka izany ihany koa tao amin'ny Asia Plus, tranokalam-baovao tsy miankina ao Tadjikistan ireo Tajik:
Mandram-pahoviana no handeferantsika ireo fanitsakitsahana ataon'ny Kyrgyz? Nahoana no tsy mandray fepetra mivaingana ireo manampahefantsika? Mangataka amin'ny Asia Plus aho mba hanadihady ireo toejavatra izay ampandohalehana ny firenentsika eo anoloan'ny rehetra
Saingy mpamaky hafa tao amin'ity habaka ity ihany kosa nandrisika ireo mpaneho hevitra mba tsy hifampihantsy ary niantso ny amin'ny firaisan-kinan'ny Miozolomana mandritra ny volana masina Islamika:
Efa nandeha tamin'izany toerana izany ve ny iray aminareo? Amin'izao fotoana iainantsika izao aza mino izay vakianao ianao raha tsy mahita maso manokana. Mety ampiasain'ireo hery ivelany ho amin'ny tombotsoany manokana ny fankahalanao tsy amin'ny antony. Mirary Ramadan sambatra!
Nanambara ireo mpampanoa lalànan'i Tadjikistan sy Kirghizistan fa hanao famotorana momba ny ady tamin'ny 10 Jolay tao amin'ny sisintany Kyrgyz sy Tajik. Tsy nahomby hatramin'izao ny fifampidinihana teo amin'ny vaomiera iraisan'i Tajik sy Kyrgyz natsangana tamin'ny volana Janoary mba hisorohana ny adin-tsisintany. Eo amin'ny 600 km amin'ny 900 km manaraka ny sisintany Kyrgyz-Tajik ihany no mbola voafaritra hatramin'izao.